कुर्कुरे र वाइ वाइको मुल्यवृद्धि रोक्न लक्ष्मीपुजा ! « Gajureal
कुर्कुरे र वाइ वाइको मुल्यवृद्धि रोक्न लक्ष्मीपुजा !
प्रकाशित मिति: २२ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०३:५८
“ला ! मसँग त ४० रुपैँया मात्र छ!” अघिल्लो महिनाको कुर्कुरे मुल्यवृद्धि पछि हजारौं ‘टिने केटाकेटी’हरुको मुखबाट ठ्याक्कै यही वाक्य सुनियो । जाबो ४० रुपैँयामा पाईने कुर्कुरे ह्वात्तै ५० रुपैँया पुगेपछि ‘जंकफुड रोगी’ टिनेहरुको अवस्था झन् बिग्रँदै गएको छ ।
“म त फोर्टी लिएर आको थिएँ तर प्राइस बढेर फिफ्टी भएछ ! त्यसैले ट्वेन्टिको दुइटा पोटेटो क्रेकर्स किन्नुपर्‍यो ।” हिजो जसरी खल्तीमा ४० रुपैँयामात्र बोकेर पसल पुगेका कैयौँ टिनेमध्ये एक महिला टिने (गोपनियताकालागी नाम समावेस नगरिएको)ले भनिन् । पहिला एउटै कुर्कुरेको दाममा दुइटा पोटेटो क्रेकर्स आउने भएपनि स्वाद र सन्तोषको कुरामा कुर्कुरे जस्तो नभएकोले अधिकांश टिनेहरु कुर्कुरे नै रुचाउँछन् ।
यसैगरी सबै ‘नेपालीहरुको मनमा भएको तयारी चाउचाउ वाइवाइ’को पनि मुल्य १५ रुपैयाँबाट बढेर कतै १७ त कतै १८ पुगेको छ ! ‘रारा चाउचाउ’ रु. २० पुगेको रिस अझै पनि सबको मनमा बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा ‘चौधरी ग्रुपको उत्कृष्ट उत्पादन’ वाइवाइको मुल्यवृद्धिपछि त्यसको बिक्री ड्याङै घट्ने आशंका गरिएको थियो । तर, १७ रुपैयाँको चाउचाउ किन्न १० र ५ को कागजी नोट् र २ रुपैयाँको सिक्का बोक्नुभन्दा सिधै २० रुपैयाँको कागजी नोट बोक्न सजिलो भएको हुनाले वाइवाइ चाउचाउको बिक्रीमा केही असर परेको देखिएन । फिर्ता आउने ३ रुपैयाँले मसिना मिष्ठान्न खरिद गरिने भएकाले चक्लेटको पनि व्यापार बढेको छ ।
यही प्रसङ्गमा कुर्कुरे र वाइवाइको देखासिखी गर्दै अरु चाउचाउ र बिस्कुटको पनि मुल्यवृद्धि नहोस् भनी काठमाडौं उपत्याकाका हजारौ घरहरुमा हिजो लक्ष्मीपूजा मनाइयो । उता किराना पसलेहरु भने हरेक खाद्यपदार्थको मुल्यवृद्धि होस् भनेर लक्ष्मी माताको नाम जपिरहेको समाचार वाहियात हो ।
यो लेखको पहिलो शब्द देखी यहाँसम्म पढ्नुहुने सबै पाठकहरुकोलागी गजुरियल डट्कमको तर्फबाट कुर्कुरे र वाइवाइ चाउचाउ आजीवन वितरण गरिने कुरा उल्लिखित समाचारभन्दा वाहियात हो । ह्याप्पी गोरु तिहार!